भगवान मुक्तिनाथले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् माघ १५ गते बिहिबारको राशिफल Canada Nepal
क्यानाडानेपाल माघ १५ २०७७
२०७८ मा पर्‍यो तीन दशैँ, कहिले कुन चाड ? हेर्नुहोस्
काठमाडौँ - विसं २०७८ मा तीन दशैँ परेको छ । यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दशैँ परेको छ । वैशाख ७ गते मङ्गलबार चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैँ परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृत गरेको पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा उल्लेख छ ।
चैत्र शुक्ल र आश्विन शुक्ल पक्षमा पर्ने दशैँलाई वैदिक सनातन धर्मावलम्बी नेपालीले ठूलो चाडका रूपमा मनाउँछन् । शक्तिको आराधना गर्न वर्षमा चार नवरात्र पर्ने भए पनि चैत्र शुक्ल र आश्विन शुक्लको दशैँलाई नेपालीले महत्वका साथ मनाउने गरेको समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतम बताउछन्।
वर्षमा चारपटक अर्थात् चैत, असार, असोज र पुस महिनाको शुक्ल पक्षमा देवीको आराधना गर्ने नवरात्र पर्छ । असार र पुसमा पर्ने नवरात्रमा साधकले साधना गर्ने गरे पनि आमरूपमा मनाउने परम्परा छैन । यस वर्ष विसं २०७७ असोजमा मलमास (अधिकमास) परेकाले विसं २०७८ मा तीन वटा दशैँ परेको उनले जानकारी दिए।रासस
फाल्गुण १७, २०७७ सोमवार १२:५५:२२ बजे : प्रकाशित
फाल्गुण १७, २०७७ सोमवार ०९:०३:५० बजे : प्रकाशित
कालिञ्चोक भगवतीले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् आज २०७७ फाल्गुन १७ गते सोमबारको राशिफल
मेष राशि - पतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले कार्य सम्पादनमा सजग रहनु पर्ने समय रहेकोछ । पारीवारका सदस्यहरु बाट टाढाँ भएको महसुस हुनेछ । बाणीका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्नेछ । यात्राका क्रममा सामान्य समस्या देखापर्न सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । भौतिक साधनको खरिदका निम्ती सामान्य खर्चको योग बन्नेछ ।
बृष राशि - अध्यन अध्यापनका निम्ती समय मध्यम रहेकोछ । आफन्तजनहरुको स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । आय आर्जनका निम्ती मान्यजनहरुको मार्गदर्शन उचित रहनेछ । गरीरहेकोकार्यमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अपरीचित ब्यत्तिहरुको पूर्ण बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।
फाल्गुण १७, २०७७ सोमवार ०७:४०:४० बजे : प्रकाशित
११ महिनाअघि नै प्रचण्डलाई ओलीबाट खतरा छ भन्दै सचेत गराएका थिए यी ज्योतिषीले
काठमाडौं । आजभन्दा ११ महिना अघि नै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिबाट धोका हुने योग बनेको भन्दै ज्योतिषी सुरेश चन्द्र रिजालले सावधानी हुन आग्रह गरेका थिए ।
२०७७ सालमा अचानक राजनीति परिवर्तनको योग हुने संकेत देखेपछि नयाँ वर्षको सुरुवाती समयदेखि नै जानकारी गराउदै आएका थिए ।
पछिल्लो राजनीति घटना बढेसंगै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सात पटक सम्म प्रधानमन्त्री बन्ने योग रहेको छ भनेर २०७४ सालमा गरेको भविष्यवाणीले पनि यतिबेला रिजालको निक्कै चर्चा छ र सामाजिक सञ्जालमा उनको अत्याधिक खोजि भैरहेको छ । शासन सत्ता सम्हाल्ने हरेक राजनेताले यस्ता भविष्यवाणीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्दा यस्तो समस्याको सामना गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।
ज्योतिषलाई वेदको तेस्रो आँखा भनेर परिभाषित गरिएको छ । सफल शासकहरु प्रचिन काल देखिनै ज्योतिष तथा खगोल शास्त्रको निर्देशनमा आफ्ना योजना तय गर्ने गर्दथे।
महाप्रतापी त्रिलोकपति राजा रावण जसले चार वेद कण्ठस्थ बनाएका थिए । उनी ज्योतिषका सिद्ध ज्ञाता पनि हुन् । जसले रावण संहिता जुन ज्योतिषको सिद्ध ग्रन्थको नै रचना गरेका थिए । जसको बलबाट उनले शनि र यमराजलाई आफ्नो वसमा पार्न सफल भएका थिए ।
देउवाको भविष्यबाणी गर्ने ज्योतिषीको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा, को हुन भविष्यबाणी गर्ने ज्योतिषी ?
देवर्षी नारद भगवान् श्रीकृष्ण, भीष्मपितामह, कर्ण आदिले पनि ज्योतिषमा राम्रो ज्ञान हासिल गरेकै कारणले अहिलेसम्म उनीहरूको पूजा तथा आदर गरिरहेको पाइन्छ । यसरी देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको भविष्यवाणी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिबाट प्रचण्डलाई अफ्ट्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने भन्दै सचेत गराएका थिए ।
ग्रह,राशि तथा नक्षत्र अध्ययन गरेर पुष्पकमल दाहलको राशिबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राशि षडाष्टक योग बन्ने भएकाले लामो समयसम्म गठबन्धन टिक्न नसक्ने भन्दै आग्रह गरेका थिए ।
प्रचण्डको कार्तिक २९ गतेबाट शनिको अढैया दशा सुरुभएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलिको मध्य साढेसाती शनिको दशा चलिरहेको छ । दुवैको राशि एक आपसमा सत्रुतापूर्ण योगमा रहेकाले अहिले देशमा यस्तो अवस्था आएको ज्योतिषी रिजालले जानकारी गराए ।
फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार ०८:३४:२९ बजे : प्रकाशित
# सुरेश चन्द्र रिजाल
बिक्रमबाबाले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् फाल्गुन १६ गते आईतबारको राशिफल
फाल्गुण १६, २०७७ आइतवार ०७:१९:१९ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - पुस शुक्ल पूर्णिमादेखि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले घरघरमा शुरु गरेको एक महिने स्वस्थानी ब्रत आज विधिपूर्वक समापन गरिँदै छ । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक स्वस्थानीको ब्रत शुरु गरी नित्य मध्याह्नकालमा पार्वतीसहित महादेवको पूजा गरेका देशभरका भक्तजनले आज ब्रत समापन गर्न लागेका हुन् । त्यसै दिनदेखि शुरु गरिएको स्कन्द पुराणअन्तर्गत केदार खण्डको माघ माहात्म्यमा कुमार र अगस्त्यबीच भएको संवादलाई स्वस्थानी कथाका रुपमा भन्ने र सुन्ने काम पनि आजैदेखि अन्त्य गरिँदैछ ।
महिला ३५ र पुरुष १४ गरी ४९ जना यसपटक ब्रतमा सहभागी भई परम्परादेखि गरिँदै आएको माधवनारायण ब्रतको संस्कृति संरक्षण गरिरहेको श्री माधवनारायण स्वस्थानी ब्रत तथा शालीनदी सुधार समितिका अध्यक्ष मीजेन्द्रकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।रासस
फाल्गुण १५, २०७७ शनिवार ०७:५१:१५ बजे : प्रकाशित
# स्वस्थानी व्रत